Saturday March 03, 2018 - 11:15:16 in Wararka by Super Admin
Magaalada Kampala ee caasimadda wadanka Uganda waxaa lagusoo gaba gabeeyay shir ay isugu yimideen hoggaamiyaasha dowladaha ciidamadoodu duullaanka kusoo qaadeen dalka Soomaaliya.
Shirka oo looga hadlayay masiirka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya dagaalka uga jira ayaa canaan kulul loogu jeediyay hoggaanka dowladda Federaalka oo xaadir ku ahaa madasha shirka.
Hoggaamiyaasha ciidamadoodu kusoo duuleen Soomaaliya ayaa walaac ballaaran ka muujiyay awoodda sii kordheysa ee Xarakada Al Shabaab iyo dhaqaalaha uu ka jaray Ururka midowga Yurub.
Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa canaan kulul usoo jeediyay Farmaajo oo uu dusha uga tuuray mas'uuliyadda in Maleeshiyaadka Soomaalida ay hanan waayaan ammaanka haddii ciidamada shisheeye dalka laga saaro.
Dowladaha shirka isugu yimid oo ka koobnaa 5 dal oo kala ah Itoobiya, Kenya, Uganda, Burundi iyo Jabuuti ayaa war murtiyeed ay soo saareen wuxuu muujinayay guul darrada dhanka dhaqaalaha iyo melleteriga ah ee kasoo wajahday dagaalka ka socda dalka Soomaaliya.
Marka si fiican loo akhriyo nuxurka natiijadii kasoo baxday shirkii Kampala ayaa aheyd sidaan:-
1-in walaac laga muujiyay qaraarkii Q.Midoobe ee ku baaqayay in gaba gabada sanadda 2020 dhammaan ciidamada AMISOM laga saaro Soomaaliya
2-Xarakada Al Shabaab wali waa awood jirta oo halis ku ah dowladda kajirta Soomaaliya
3-haddii ciidamada AMISOM isaga baxaan dalka magaalooyin waaweyn ayaa si fudud uga dhaca gacanta Al Shabaab
4-waxay ka dalbadeen Midowga Yurub iyo deeq bixiyaasha in ay sii wadaan maalgelinta iyo taageeradda howlgalka Midowga Afrika.
Kumanaan katirsan ciidamada shisheeyaha ayaa ku go'doonsan magaalooyin dhaca Koonfurta iyo Bartamaha dalka Soomaaliya waxayna weeraro joogta ah kala kulmayaan dagaalyahannada Al Shabaab oo taageero dhan walba ah ka helaysa qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed.